Xeebaha Melbourne ee ugu Fiican | Wararka Safarka
Xeebaha Melbourne ugu fiican
Maria Jose Roldan | | Australia, Xeebaha
Haddii aad rabto inaad Melbourne u aado fasax, waxaad u badan tahay inaad rabto inaad booqato inta ugu badan ee aad awooddo ee ku yaal caasimaddan gobolka Victoria ee Australia. Sanadkii 2011 waxaa loo doortay magaalada ugu fiican adduunka in lagu noolaado, wax shaki ku jirin oo dad badan ka dhigaya inay booqdaan oo magaaladan barataan.
Waxay ku taal xeebta Port Phillip Bay. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay qaab dhismeedka Fiktooriya iyo casriga oo dalxiisayaasheeda siiya qaar ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan Australia. Kadib Waxaan rabaa inaan kaaga sheekeeyo qaar ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan Melbourne Sidaa darteed haddii aad aado magaaladan weyn ee Australiya raadinta xeebaha cajiibka ah, waxaad haysataa liis fiican oo aad ka dooran karto oo aad ku raaxeysan karto.
1 Xeebta St. Kilda
2 Xeebta Brighton
3 Xeebta Mordialloc
4 Xeebta Williamstown
5 Xeebta Sorrento
6 Xeebta Elwood
7 Xeebta Altona
8 Xeebaha kale ee ay tahay inaad ogaato
Xeebta St. Kilda
Mid ka mid ah xeebaha ugu caansan waa shaki la’aan St. Kilda Beach, waa xeeb ku habboon dabaasha iyo waliba isboorti kasta oo biyo ah oo ay ugu mahadcelinayaan biyaheeda cajiibka ah. Laga soo bilaabo dhagaxa waxay leedahay wado-socod weyn oo leh ciid qurux badan, waxaad ku raaxeysan kartaa aragti aan caadi ahayn oo magaalada ah.
Haddii aad tagto xeebtaan waxaad qaadan kartaa doonta kuu qaadi doonta Williamstown ama Southbank. Ikhtiyaarka kale ee weyn waa Brighton Beach, mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan Melbourne. Waxay leedahay aqallo badan oo midabyo badan leh oo ku yaal qadka xeebta, waa goob ku habboon dabaasha, qubeyska iyo badmaaxiinta. Markay dabayshu dhacdo waxaa jira hirar quruxsan oo hagaagsan oo ku habboon badmaaxayaashu, in kasta oo ay waliba tahay meel fiican haddii aad jeceshahay kalluumeysiga
Intaa waxaa dheer, xeebta waa socod gaaban oo ka imanaya maqaayadaha, dukaamada iyo makhaayadaha, taasoo ka dhigeysa Brighton Beach mid ka mid ah kuwa ugu caansan.
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin xeeb leh wax ka badan ciid iyo biyo kaliya, markaa waxaad jeclaan doontaa Mordialloc. Mordi waa xaafad koonfur-bari waana meel ay tahay inaad booqato xiisaha ay u leedahay. Waxay leedahay makhaayad, goob lagu dubto hilibka hilibka lagu cunto, aagagga tamashlaha, waddo baaskiil ... iyo dhagxaanta aad jeceshahay inaad booqato. Waa xeeb aad loo jecel yahay, sidaa darteed haddii aad rabto inaad ka fogaato dad fara badan waxaa ugu wanaagsan inaad iska ilaaliso inaad tagto maalmaha fasaxa ah.
Xeebtan ayaa dadka deegaanku u yaqaanaan 'Willy Beach', waa mid yara yar laakiin qurux badan leh, marka lagu daro, waxay aad ugu dhowdahay magaalada. Waa xeeb caan ku ah dabaasha, qoraxda, iyo badmaaxiinta, laakiin waa aragtiyada xiisaha leh ee dadka ku soo jiidaya Williamstown taariikhi ah. Haddii aad ogaan doontid waxyaabaha yaabka leh waxaad ogaan doontaa waxa aan ka hadlayo.
Kaliya shan daqiiqo oo socod ah oo laga raaco xarunta tareenka waxaad ka heli doontaa muuqaal cad oo aan hor istaagayn oo ku saabsan muuqaalka magaalada - maalin qurux badan habeenkiina wacdaro. La yaab maleh taasi Williamstown Noqo meel ku habboon helitaanka Sannadaha Cusub, halkaas oo dad badani isugu yimaadaan si ay u qabtaan rashka oo qof walba jecel yahay inuu ku raaxeysto.
Xeebta Sorrento waa farxad xeebeed. U dhow biyaha Port Phillip Bay maxaa yeelay waxay ku leeyihiin dhinac dhinac iyo Bass Strait dhinaca kale, waa meesha ugu fiican ee lagu raaxeysto gabbal dhaca. Waxaa habboon in la galo safar si loogu raaxeysto quruxda ciiddeeda iyo biyaheeda.
20 daqiiqad u jirta bartamaha magaalada Melbourne, Elwood Xeebta waa soo jiidashada ugu weyn ee qoyska oo dhan. Marka lagu daro xeebta sidoo kale waxay leedahay xarumo badan oo lagu raaxeysto maalinta sida hilibka lagu dubto, dalxiisyada iyo aagagga ciyaarta cawska. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay leedahay aag ammaan ah oo aad awood ugu yeelan karto inaad si deggan u dabaashaan, in kastoo haddii aad jeceshahay inaad wax badan ka guurto, ka dib sidoo kale u aad socodka iyo baaskiil xeebta.
Altona ee Melbourne waa meel fiican haddii aad rabto maalin caajis ah xeebta. Waqti dheer ka hor, biyaha Altona waxay caan ku ahaayeen qaddarka layaabka leh ee algae ay lahaayeen. Maanta, iyada oo nadaafadda maalinlaha ah ay fuliyeen xirfadleyda goobta, biyaha Altona Way ka nadiifsan yihiin sidii hore waana goob cabsi leh oo lagu dabbaasho.
Waxaa jira qayb ka mid ah xeebta oo si gaar ah loogu talagalay kitesurfing. Sida haddii aysan taasi ku filnayn, waxay kaloo leedahay makhaayado kala duwan, makhaayado iyo goobo kale oo madadaalo ah oo lagu raaxeysto.
Xeebaha kale ee ay tahay inaad ogaato
Marka lagu daro dhammaan xeebaha aan hadda idiinka sheegay - oo ah inaad horey u qori kartid si aad u aragto kuwa adiga aadka kuu xiiseynaya-, waxaa kale oo jira kuwo kale oo sida xaqiiqada ah xiiso kuu yeelan doona iyo haddii aad waqti dheeraad ah hesho, waxaad ka fikiri kartaa inaad ogaato sidoo kale. Qaarkood waa (oo dhammaantood waxay ku habboon yihiin in lala raaxeysto qoyska):
Carrum - afka Webiga Patterson-
Sidaad aragtay, ma jiraan xeebo yar oo ka jira agagaarka Melbourne. Haddii aad qorsheyneyso inaad u safarto Melbourne waxaad ogaan doontaa in magaaladan Australiyaanka ah aad ka heli karto xeebo dhammaan dhadhankeeda, inaad ku raaxeysato qubeyska, inaad sameyso waxqabadyo biyo ah, inaad maalin la qaadato reerka, inaad dubeyso, inaad ku raaxeysatid galab tamashleyn ah ama si fudud, si loogu socdo oo loogu raaxeysto muuqaalka.
Aadida xeebta waa fikrad aad u fiican in laga cararo buuqa magaalooyinka, maadaama Melbourne ay tahay magaalada labaad ee ugu dadka badan Australia, sidaa darteed waxaad dareemi kartaa sida nolosha walaaca leh ugu dhex jiri karto jidadkeeda. Dadka degan, xeebahu waxay lamid yihiin waalka badbaada ee ugu fiican ee lagu raaxeysan karo nolosha ka baxsan magaalada, in la iloobo shaqooyinka maalinlaha ah iyo in lagu raaxeysto layaabka, baaxadda iyo qiimaha ay baddu noo soo gudbiso iyo sida wanaagsan ee aan u dareemno.
Marka haddii aad fursad u haysato inaad u safarto xeebtaan Australia, haka laba labeyn inaad khariidad qaadato, fiiri halka aad tegeyso oo ka hel xeebta aad ugu jeceshahay inaad maalinta ku qaadato oo aad ku raaxeysato. Hadana hadaad rabto inaad dhiiro gasho ka dib raadi gaadiid dadweyne ama kireyso gaari si aad u raacdo wado gaaban una ogaato xeebta ugu badan ee suurtogalka ah inta lagu jiro booqashadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Xeebaha » Xeebaha Melbourne ugu fiican
Safarka Okinawa, Japan kulaylaha